Lasa Nifanandrina ny Football sy ny Labiera ao Panama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2013 15:12 GMT
Football sy labiera, zava-droa tian'ny Panameana indrindra, no lasa nifandona rehefa nalain'ny orinasa mpamokatra labiera Baru-Panamá [es] ny kaonty bankin'ny Federasiona Panameana Football (FEPAFUT), itakiany onitra $7 tapitrisa dolara amerikana noho ny fanapahana fifanarahana.
Nitatitra toy izao i Cocoas [es] tamin'ny 25 Avrily 2013:
Tsy vitan'ny vaovao ratsy ihany fa mampihoron-koditra ho an'ny Federasiona Panameana Football, izay nandatsaka ny baomba androany fa nalain'ny Barú Brewery ny volan'ny FEPAFUT mihoatra ny enina tapitrisa dolara. Mihainoa! Tsy fanao ny mikivazivazy amin'ny vola…
Ao Panama, ahazoam-bola 390 tapitrisa dolara isan-taona ny fanjifàna labiera, mametraka azy ho iray amin'ireo tampony amin'ny famokarana sy fisotroana ao Amerika Latinina. Araka ny Central América Data [es]:
Misanda mihoatra ny 390 tapitrisa dolara isan-taona ny tsena ary fehezin'orinasa roa goavana: Ny Mpamokatra Nasionaly, sampan'ny SabMiller, sy ny mpamokatra labiera Barú-Panamá, eo ambany fifehezan'ny Heineken N.V. 247,2 tapitrisa litatra ny labiera vokatra tamin'ny herintaona, mihoatra 5.1% noho ny tamin'ny 2010, tarehimarika mihoatra noho ny seco (6 tapitrisa litatra) sy sy ny raoma (7,2 tapitrisa litatra), araka nisy isa avy amin'ny Biraon'ny Kaonty Ankapobeny.
Etsy andaniny, nahitana fivelarana faingana ny football tao Panama, nahasarika mpankasitraka an'arivony maro hijery ny lalaon'ny ekipam-pirenena Panameana izay sambany hita tena manakaiky ny ho tafita amin'ny dingana fifantenana amin'ny mondialy. Ny FIFA [es] mihevitra an'i Panama ho firenena nahitana fandrosoana indrindra eo amin'ny faritr'i CONCACAF (Konfederasionan'ny Fikambanan'ny Football ao Amerika Avaratra, Afovoany ary Karaiba), araka ny filazan-dry zareo azy ao amin'ny habaka:
Lalao Football, Panama. Saripikan'i Eirene Moreno, nahazoana alalana.
Araka ny fandrosoan'i Panama [es], na dia eo aza ny fahareseny tamin'ny famaranana, niverina izany hampisehoany fa izy no ekipam-pirenena hainga-pandroso indrindra ao amin'ny faritra CONCACAF, ary nandroso hankany amin'ny fandraisana anjara faharoa eo amin'ny sehatra manerantany ho an'ny latsaky ny 17 taona izany rehefa nahavita lalao mahavalalanina vitsivitsy izy.
Hatramin'ny desambra 2014 ny fifanarahana teo amin'ny mpamokatra labiera sy ny andry lehiben'ny football ao Panama, saingy naato izany tamin'ny Desambra 2012 raha nanasonia fifanaraham-piaraha-miasa tamin'ny mpamokatra labiera nasionaly ny federasionan'ny football Panameana izay mitentina 10 tapitrisa dolara hatramin'ny 2018, (ny fifanarahana tamin'ny Barú dia $120.000 isan-taona).
Nalaza ny fisian'ilay fandraofana rehetra niezaka ny hanangona ny loka azon-dry zareo tamin'ny fifaninanana ny mpikamban'ny ekipa Panameana latsaky ny 17 taona, izay tafakatra hanao ny mondialy avy ao amin'ny sokajy nisy azy. Notsongain'ny La Prensa [es] ny tenin'ny filohan'ny Federasiona Panameana Football, Pedro Chaluja:
“Tsy fantatray ny fandehan'io fito tapitrisa dolara io satria tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fitakiana ry zareo ary tsy nomena filazàna izahay. Ny hany fantatsika dia nisy ny fandraofana, izay voamarikay rehefa tsy nahazo ny shekim-pandreseny ny mpilalao latsaky ny 17 taona.”
Tsy niandry ela ny fihetsehampo avy amin'ny tambajotra sosialy ary maro no mahatsapa ho tratran'ny fivadihana tamin'ny fihetsika nataon'ny orinasa mpanao labiera Baru.
Mihevitra i George Haywood (@25haywood) [es] fa tsy amin'ny federasiona ihany no misy ny fiantraikan'ny fandraofana fa any amin'ny hoavin'ny Panameana mihitsy:
@25haywood: tamin'ny fandraofana nataon-dry zareo tamin'ny fepafut, noraofin-dry zareo ny football an'i Panama sy ny hoavin'ny tanora maro.
Nantso ny hanaovana fahirano hampitsahatra ny fividianana ny vokatry ny Baru ny kaonty Vía Noticias (@traficologo) [es] :
@Traficologo: Mpankasitrak'i Panama : aza mividy ny vokatra avy amin'ny mpamokatra labiera Barú sy @cerveza_panama. Misy fiantraikany amin'ny ekipam-pirenen'i #Panama ny zavatra ataon-dry zareo hamelezana ny @fepafut.
Mihevitra i Rodrigo Tomás (@rodtomas18) [es] fa mety hisy risika ny firosoan'i Panama mankany amin'ny mondialy noho io fepetra noraisina io:
Cerveza Panamá. Sary avy amin'ny mpisera Flickr Daniel Huggard, ambany lisansa Creative Commons (CC BY-ND 2.0)
@rodtomas18: Mba azon'ireo vahiny avy ao amin'ny @cerveza_panama veroka ve ny lanjan'ny La Roja [Ekipam-pirenena Panamaneana] ho antsika? Nataon-dry zareo idiran-doza ny drafitsika ho amin'ny mondialy!
Saingy, mihevitra kosa i Nino Mangravita (@ninomangravita) [es], fa tsy misy ifandraisany loatra amin'ny fiatrehana ny mondialy ny zava-mitranga eo amin'ny Fepafut sy ny mpamokatra labiera fa resaka fandraharahana izany:
@ningomangravita: tiantsika rehetra handresy ny ekipantsika, fahatsapana izany…fa bizina kosa no misy eo amin'ny Fepafut sy ny CB amin'izao fotoana, tokony hovahan-dry zareo izany.
Mitovy hevitra amin'izany i Jacinto Gonzalez (@JacintoElias) ary mihevitra izy fa tokony hajaina amin'ny fotoana rehetra ny fifanarahana natao:
@JacintoElias: @lilyvargastv Rehefa fifanarahana dia fifanarahana, nihevitra ny Fepafut fa hatramin'ny nahatafakatra azy dia tsy hihetsika ny mpamokatra labiera Panama. Tian'ny Panameana izay mahatsanga-tanana ambony kokoa
Tsy maintsy namoaka taratasim-piarovantena ny Cevecería Baru tamin'ny famoahana taratasy tao amin'ny bilaoginy nanazavazavany fa tsy fikasan-dry zareo ny hanimba ny football fa ny hifampiraharaha [es] sy ny hitady tarehim-bola hahafapo ny roa tonta.